Guddiga doorashooyinka Puntland oo maanta markale wakhti kordhin sameyaay (Akhriso) – Radio Daljir
Guddiga doorashooyinka Puntland oo maanta markale wakhti kordhin sameyaay (Akhriso)
Janaayo 3, 2018 9:00 b 1
Guddiga Kumeel gaar ah ee doorashooyinka Puntland oo maanta warbaahinta kula hadlay Garowe ayaa markale wakhti kordhin u sameyaay Xisbiyada siyaasadeed,iyago oo bandhigay ilaa 4 Xisbi siyaasadeed oo is diwaan galiyaay.
1. Guddigu wuxuu garowsaday in ilaa hada ay is diiwaan geliyeen 4 urrur siyaasadeed oo kala ah (Gar-soor, Umadda, Ubax iyo Himilo).
2. Guddigu isagoo tix gelinaaya geedi socodka nidaamka xisbiyada badan ee Puntland wuxuu go’aan ku gaaray in uu fursada dheeraad ah siiyo daneeyayaasha siyaasada puntalnd. Sidaa darteed Guddigu waxa uu go’aansay in uu wakhtiga diiwaan gelinta ku daro mudo hal bill ah oo ka billabmaysa 3/Janaury/2018 kuna eeg 3/feberaury/2018.
3. Guddigu wuxuu ku dhiiri gelinayaa urruradii horay isu diiwan geliyey in ay soo dhamays tiraan shuruudihii looga baahna. Sidoo kale Guddigu wuxuu fursad siinayaanaa siyaasiyiinta danaynaysa in ay urruro siyaasaded furtaan.
4. Guddigu waxa uu ku war gelinayaa urrurada siyaasada Puntland ee is-diiwaan geliyey iyo kuwa doonaya in ay is-diiwaan geliyaanba in 28/Feberuary/2018 Guddiga bilaabi doono in uu hubiyo in urrurada siyaasada ee is-diiwaan geliyey ay buuxiyeen shuruudaha sharciga ah ee looga baahnaa.
5. Guddigu wuxuu ku war gelinayaa urrurada siyaasada ee is-diiwan geliyey in guddigu ku casumay 10/01/2018 kulan is-barasho iyo is-xog waraysi ah, Kulanku waxaa uu ka dhici doonaa xarunta dhexe ee guddiga ee Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland ee magaalada garoowe sacaadu marka ay tahay 09:00 am.\_
Wasiirka Qorsheynta iyo Xiririka caalamiga ah ee Dfs oo Qardho gaaray (dhegayso)
Liban Gegiroor 2 years ago
aad iy aad ayaan ugu faraxsanahay shaqada wacan ee aad u ahaysaan umada soomaliyeed, Runtiidaljir waa idaacada ku caan baxday in aya dalkeeda usoo gudbiso warar suagan oo sax.
Waa Mahadsantihiin sxbayaal